Sideen ku fahmaa dadka kala duwan farxadooda? - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Rays / Sideen ku fahmaa dadka kala duwan farxadooda?
Sideen ku fahmaa dadka kala duwan farxadooda?
4 Min Akhri
Dad kala duwan ayaa leh waxyaabo kala duwan taas iyaga ka farxi. Haddii qof farxadiisu aysan u dhigmin kaaga, iska aqbal oo ogow inaadan u baahnayn inaad aqbasho farxadiisa. Uma baahnid inay iska diiwaangeliyaan taada sidoo kale. Ma jiro qaab “sax ah” ama “qaldan” oo farxad ah. Dadku waa shaqsiyaad waxayna leeyihiin dareeno gaar ah.
Tusaale ahaan, Carrie waxay shukaansaneysay Jonathan laakiin sababo jira awgood, ma aysan dareemin farxad. Jonathan si wanaagsan ayuu ula dhaqmay Carrie si fiicanna wuxuu ugu fiicnaa warqad. Carrie waxay dareentay wax laga argagaxo inaanay runti ku faraxsanayn Jonathan maxaa yeelay wuu macaanaa oo qofkasta oo nolosheeda ka mid ah wuxuu jeclaa inuu agtiisa joogo. Waxay aakhirkii kala tagtay Jonathan oo ay bilawday shukaansi Camron. Camron wuxuu ahaa nin nacas ah oo xaqiraya Carrie kana filayay inay had iyo jeer daboosho baahidiisa. Labaduba si isdaba joog ah ayey u dagaallameen waxayna ka yeeleen Carrie saaxiibbadeed iyo qoyskoodaba raaxo la'aan. In kasta oo dadku ka walaacsanaayeen Carrie, haddana runti way ku faraxsanayd Camron. Carrie waxay jeceshahay dareenka dhibane ahaaneed iyo Camron waxay jeceshahay dareenka dhibbane Carrie.
Maxaa dhacaya haddii a narcissist waxaa loo maleynayaa inuu ku noolaanayo noloshooda nin narcissist ah? Yaan xukumeynaa? Waxaan halkan u joognaa inaan ku noolaano nolosheena. In kasta oo tani xaqiiqdii aysan ahayn kiiska dhammaan dhibbanayaasha, dadka qaarkood waxay jecel yihiin inay ku jiraan kaalinta dhibbanaha. Dadka leh farxaddan, waxay ka tirsan yihiin narcissist. Wax walba waxay leeyihiin dhigiisa. Sababtoo ah inaadan laheyn maskaxda dhibanaha, micnaheedu maahan in qof walba uusan laheyn ama aysan aheyn. Maxaa dhacaya haddii ay dareemaan raaxo yar markay dareemaan xanuun? Raaxo aanad garanayn ama aanad dareemaynin maxaa yeelay sidaas laguuguma dhisin. Dadka waa in loo oggolaadaa inay rumaystaan ​​waxay rabaan inay rumeeyaan oo ay dareemaan waxa ay doonayaan inay dareemaan. Waxaa loo yaqaan ixtiraamka aadanaha. Ixtiraam midba midka kale inuu yeesho aragtiyo kala duwan. Taasi waa waxa inaga dhigaya aadanaha.
Dadku had iyo jeer waxay isku dayaan inay iska iibiyaan midba midka kale qaabkiisa farxadeed. Waxay si miyir la’aan ah uga raadiyaan xaqiijinta dadka kale iyagoon ogeyn in dareenka farxadda shaqsiyadeed ay tahay dhammaan ansaxinta ay u baahan yihiin. Haddii qof uusan dareemeynin farxad, waxaa la joogaa waqtigii ay qiimeyn lahaayeen waxa ka hortagaya dareenkaas, oo ay saxaan. Hadaad aragto qof faraxsan, looma baahna inaad dhaleecayso iyaga ama xulashadooda. Kaliya u ogolow iyaga inay ahaadaan oo ay diiradda saaraan himiladaada gaarka ah ee farxadda. Haddii farxaddoodu ka soo horjeeddo middaada, waxaad had iyo jeer leedahay ikhtiyaarka aad ku aqbali karto iyaga ama ka saar noloshaada. Si kastaba ha noqotee, farxadaada shaqsiga ah ayaa sida ugu fiican loogu adeegi lahaa iyada oo aan xukumaa iyaga oo yeelanaya aragti ka duwan.
Dadku xitaa waxay isku dayaan inay ka doodaan waddanka / magaalada ugu fiican meesha lagu noolaado. Tani gabi ahaanba waa shaqsi. Dadka qaarkiis waxay jeclaan lahaayeen inay ku noolaadaan jasiirad halka kuwa kale ay dareemaan inaysan jirin waxyaabo ku filan oo la sameeyo. Dadka qaarkiis waxay jeclaan lahaayeen inay ku noolaadaan buuraha halka kuwa kalena ay dareemayaan inay ka go'een fursadaha. Dadka qaarkiis waxay jeclaan lahaayeen inay ku noolaadaan meel ay dadku saaxiibtinimo ku leeyihiin halka kuwa kale ay ka xanaaqi doonaan in qof walba oo magaalada jooga uu wadahadal joogto ah la yeesho. Jawaab sax ah looma hayo waxa qof walba u qeexaya farxadiisa. Jawaabta kugu habboon adiga ayaa lagu go'aamiyaa sida aad dareemayso. Ilaah waa isku-darka dhammaan xoogyadan si loo aqbalo dhammaantood, iyo noocyadooda kala duwan ee farxadda, waxay muujinayaan aqbalaadda waxaas oo dhan.
Farxaddaadu waa mid gaar ah.
Maxaa ku xoogeeya,
i daciifin kara
Siyaabahaaga naasiga ah waxay abuuraan xayawaankeyga.
Maxaa kaa nixinaya,
farxad ii keeni kara.
Oohintaada qoslaysa waxay noqon kartaa oohinteyda.
Maxaa inaga dhigaya inaan is wajahno,
Meeriskaaga waa inaan aqbalaa.
Maxaa kaa dhoola cadeynaya,
Waan ixtiraami doonaa
Tagsaqbalida miyirka farxad koritaanka shakhsi ahaaneed gabayo ruux ahaaneed
Waa maxay ujeedada cawl, madow iyo caddaan?
Sidee falaadhu ula fal galaan midba midka kale?
Sidee falaadhaha kaladuwan u saameeyaan shakhsiyadda?
Sidee dadku ugu baraarugi karaan midabkooda shucaaca aasaasiga ah?
Toddobada shucaac miyay saameyn ku yeeshaan sida dadku uga falceliyaan xaaladaha kala duwan?
Maxay dadku sameyn karaan si looga hortago tartan xad-dhaaf ah oo ka dhex dhaca fallaaraha?
Sidee ayey isu dheelitirnaan karaa True True iyo dabeecadda?
Waa maxay "Jacayl iyo Iftiin" iyo "Nacayb iyo Mugdi"?